Shiinaha 100% Kaarboonka Fiilooyinka telescopic-ka waxsoosaarayaasha waxsoosaarka iyo alaabada | Lanbao
Ushadan loo yaqaan 'telescopic ul' waxay ka samaysan tahay 100% fiber kaarboonka adkaanta sare, miisaanka fudud, xirashada iyo u adkaysiga daxalka. Usha telescopic-ka waxay ka kooban tahay seddex qaybood, iyo naqshadeynta jilicsan ee qufulka ayaa u oggolaaneysa isticmaaleha inuu dhererka si xor ah u habeeyo.
Kuwani tiirarka karboonka fidsan ee faa iidada leh si siman ayey u qulqulayaan waxaana lagu xiri karaa dherer kasta oo laga bilaabo 110cm ilaa 300cm, kuwaas oo ku habboon codsi kasta oo kaydinta isafgaradka iyo dhererka dheer loo baahan yahay. Ulahaan waa sahal in la shaqeeyo oo la qaado. Waxaa lagu dheereyn karaa dhererka ugu badan ilbiriqsiyo iyadoo la soo bixinayo oo la xirayo qayb kasta oo telescoping-ka ah.
Ushadan loo yaqaan 'telescopic ul' waxaa loo isticmaali karaa guryaha si loo nadiifiyo Windows-ka loona nadiifiyo baararka qoraxda ku shaqeeya. Usha dib u noqoshada waxay ku habboon tahay nadiifinta meel fog. Naqshadaynta Ergonomic waxay nadaafad dheer ka dhigaysaa nadaafad aad u badan oo badbaadin kara oo badbaado leh.
Waxaan haynaa koox injineero ah oo khibrad 15 sano ah u leh warshadaha kaarboonka. Maaddaama aan nahay warshad 12-sano jir ah, waxaan hubineynaa kormeerro tayo leh oo gudaha ah, haddii loo baahdana, waxaan sidoo kale bixin karnaa kormeer tayo-saddexaad ah. Dhammaan howlaheena waxaa lagu fuliyaa si waafaqsan ISO 9001. Kooxdayadu waxay ku faantaa adeegyadeena daacadnimada iyo anshaxa, waxayna had iyo jeer bixiyaan adeegga macaamiisha ugu fiican.
Magaca 100% Kaarboonka fiber telescopic pole multifunction pole
Muuqaalka Waxyaabaha 1. Waxay ka samaysan tahay modulus sare 100% fiber-ka Kaabboon oo laga keenay Japan oo leh saliida epoxy
2. Beddel weyn oo loogu talagalay tuubooyinka garabka aluminium ee heerka hoose ah
3. Miisaannada kaliya 1/5 ee birta iyo 5 jeer ka xoog badan birta
4. Karti Yarida Ballaarinta Kuleylka, Cadaadiska Heerkulka Sare
5. Adkaysi Fiican, Adkaysi Wanaagsan, Karti Yarida Ballaarinta Kuleylka
Faahfaahinta Qaabka Twill, Plain
Oogada Glossy, Matte
Khad 3K Ama 1K, 1.5K, 6K
Midab Madow, Dahab, Qalin, Casaan, Bue, Giriig (Ama Midab Xariir leh)
Waxyaabaha Japan Toray Carbon Fiber Fabric + cusbi
Waxyaabaha Kaarboon-ka 100%
Cabir Nooca aqoonsi Dhumucda gidaarka Dhererka
Tiirka Telescopic 6-60 mm 0.5,0.75,1 / 1.5,2,3,4 mm 10Ft-72ft
Codsiga 1. Aerospace, Helicopters Model Drone, UAV, FPV, Qaybaha Model Model
2. Qalabka Nadiifinta, Nadiifinta guriga, Alaab-bixiyaha, Baarka Kamerada, xulista
6. Kuwo kale
Xirxirida 3 lakab oo ka mid ah baakadaha difaaca: filim caag ah, duubo xumbo, kartoon
(Cabirka caadiga ah: 0.1 * 0.1 * 1 mitir (balac * dherer * dherer)
Iyada oo leh koonto quful leh oo caadi ah iyo dun guud, tiirarkaani waxay la shaqeeyaan dhammaan lifaaqyada Unger iyo wixii lifaaqyo leh dun guud. Markaad ku xirato qalabka wax lagu xoqo, xoqe, burushka ama boodhka mid ka mid ah tiirarkeena telescopic, waad nadiifin kartaa meelaha ay adag tahay in la gaaro si ka dhaqso badan ugana badbaado badan nadiifinta qalabka gacanta iyo jaranjarada. Markasta oo baahi loo qabo gaadhsiin ballaadhan, ha ahaato gudaha ama dibedda.
Hore: Qalabka 45Ft Hybrid telescopic pole
Xiga: Tuubbada kaarboonka kaarboonka leh dherer kala duwan, dherer waa laga beddeli karaa
Cirif Nadiifinta Daaqada Telescopic